BHS, FOSBER, AGNITI, K & H, HSEIH HISU, TCY, JS ectrr ၏မြှောင်းပုံကတ်ထူစက်အတွက်အသုံးပြုသောအပိုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ခြင်း။
ဖေါ်ပြချက်:မြှောင်းပုံခါးပတ်,Humidifier လေပေါ်မှာပ,Anilox Roll,Shaftless Mill Roll ရပ်ပါ,ဖြတ်နေမြို့ပတ်ဓား,ကြိတ်ဘီး
Home > ထုတ်ကုန်များ > မြှောင်းပုံကတ်ထူစက်အပိုပစ္စည်းများ
မြှောင်းပုံကတ်ထူစက်အပိုပစ္စည်းများ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, မြှောင်းပုံခါးပတ်, Humidifier လေပေါ်မှာပ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Anilox Roll R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Kraft စက္ကူလိပ်အလိုအလျောက် Splicer စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြှောင်းပုံစက္ကူလိပ်အလိုအလျောက် Splicer  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြှောင်းပုံကတ်ထူအော်တို / အလိုအလျောက် Splicer  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကတ်ထူပြားထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းအတွက်အော်တို Splicer စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Reel အလိုအလျှောက် Splicer ရပ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အော်တို Corrugated စက်ရုံအလိုအလျောက် Splicer  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အော်တိုကတ်ထူစက်ရုံရေမှုန်ရေမွှားစိုထိုင်းဆ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကတ်ထူပြားစက်ရုံရေမှုန်ရေမွှား humidifier  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Spray Humidifier သည်ကတ်ထူအရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကတ်ထူပြားစက်မှုန်ရေမွှား Humidifier  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Corrugator ကတ်ထူဖြန်းစိုထိုင်းဆ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
BHS Corrugator အဘယ်သူမျှမ Crush ဘီး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
BW Papersystem No Crush Wheel  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကတ်ထူပြား PU No-Crush ဘီး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Cardboad PU No Crush ဘီး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Corrugator Cardboard Polyurethane No Crush Wheel  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လျှပ်စစ်စက်ကြိတ်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Electric Shaftless စက် Roll Roll မတ်တပ်ရပ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြှောင်းပုံပုံးနံရံဟိုက်ဒရောလစ် shaftless ကြိတ်လိပ်ရပ်တည်ချက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဟိုက်ဒရောလစ် Shaftless စက် Rolls ရပ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Mill Roll ကဒ်ထူပြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ရပ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Kraft စက္ကူလိပ်အလိုအလျောက် Splicer စက်
Kraft စက္ကူလိပ်အလိုအလျောက် Splicer စက် စက်လည်ပတ်မှု ၁။ ချိတ်ဆက်ထားသောစက္ကူအမြီးမပါ၊ စက္ကူဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချပါ (အကျယ် ၄၀ မီလီမီတာနှင့်ပတ်သက်သောစာရွက်၏ထပ်တူကျမှု) ။ စက္ကူထရပ်ကားကိုဖယ်ရှားတဲ့အခါ, အလိုအလျောက်လွှဲပြောင်း...
မြှောင်းပုံစက္ကူလိပ်အလိုအလျောက် Splicer စက်လည်ပတ်မှု ၁။ စက္ကူအမြီးကိုမချိတ်ထားပါနှင့်၊ စက္ကူဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချပါ (အကျယ် ၄၀ မီလီမီတာနှင့်ပတ်သက်သောစာရွက်၏ထပ်တူကျမှု) ။ စက္ကူထရပ်ကားကိုဖယ်ရှားတဲ့အခါ, အလိုအလျောက်လွှဲပြောင်း...
မြှောင်းပုံကတ်ထူအော်တို / အလိုအလျောက် Splicer
မြှောင်းပုံကတ်ထူအော်တို / အလိုအလျောက် Splicer စက်လည်ပတ်မှု ၁။ ချိတ်ဆက်ထားသောစက္ကူအမြီးမပါ၊ စက္ကူဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချပါ (အကျယ် ၄၀ မီလီမီတာနှင့်ပတ်သက်သောစာရွက်၏ထပ်တူကျမှု) ။ စက္ကူထရပ်ကားကိုဖယ်ရှားတဲ့အခါ, အလိုအလျောက်လွှဲပြောင်း...
ကတ်ထူပြားထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းအတွက်အော်တို Splicer စက်
ကတ်ထူပြားထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းအတွက်အော်တို Splicer စက် စက်လည်ပတ်မှု ၁။ စက္ကူအမြီးကိုမချိတ်ထားပါနှင့်၊ စက္ကူဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချပါ (အကျယ် ၄၀ မီလီမီတာနှင့်ပတ်သက်သောစာရွက်၏ထပ်တူကျမှု) ။ စက္ကူထရပ်ကားကိုဖယ်ရှားတဲ့အခါ, အလိုအလျောက်လွှဲပြောင်း...
Reel အလိုအလျှောက် Splicer ရပ်
Reel အလိုအလျှောက် Splicer ရပ် စက်လည်ပတ်မှု ၁။ စက္ကူအမြီးကိုမချိတ်ထားပါနှင့်၊ စက္ကူဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချပါ (အကျယ် ၄၀ မီလီမီတာနှင့်ပတ်သက်သောစာရွက်၏ထပ်တူကျမှု) ။ စက္ကူထရပ်ကားကိုဖယ်ရှားတဲ့အခါ, အလိုအလျောက်လွှဲပြောင်း...
အော်တို Corrugated စက်ရုံအလိုအလျောက် Splicer
အော်တို Corrugated စက်ရုံအလိုအလျောက် Splicer စက်လည်ပတ်မှု ၁။ ချိတ်ဆက်ထားသောစက္ကူအမြီးမပါ၊ စက္ကူဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချပါ (အကျယ် ၄၀ မီလီမီတာနှင့်ပတ်သက်သောစာရွက်၏ထပ်တူကျမှု) ။ စက္ကူထရပ်ကားကိုဖယ်ရှားတဲ့အခါ, အလိုအလျောက်လွှဲပြောင်း...
အော်တိုကတ်ထူစက်ရုံရေမှုန်ရေမွှားစိုထိုင်းဆ စက်များ BHS BW PAPERSYSTEM FULI JS K & H MINGWEI စသည်တို့ဖြစ်သည် မိတ်ဆက် ၁။ အီတလီမှတင်သွင်းသောမြင့်မားသောဖိအားမြင့်ရေစုပ်စက်ကိုမြင့်မားသောဖိအားနှင့်အတူအက်တမ်...
ကတ်ထူပြားစက်ရုံရေမှုန်ရေမွှား humidifier စက်များ BHS BW PAPERSYSTEM FULI JS K & H MINGWEI စသည်တို့ဖြစ်သည် မိတ်ဆက် ၁။ အီတလီမှတင်သွင်းသောမြင့်မားသောဖိအားမြင့်ရေစုပ်စက်ကိုမြင့်မားသောဖိအားနှင့်အတူအက်တမ် (အသုံးပြုရန်ဖိအားမရှိသောလေအရင်းအမြစ်မလိုအပ်ပါ)...
Spray Humidifier သည်ကတ်ထူအရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်
Spray Humidifier သည်ကတ်ထူအရည်အသွေးတိုးတက်စေရန် စက်များ BHS BW PAPERSYSTEM FULI JS စသည်တို့ဖြစ်သည် မိတ်ဆက် ၁။ အီတလီမှတင်သွင်းသောမြင့်မားသောဖိအားမြင့်ရေစုပ်စက်ကိုမြင့်မားသောဖိအားနှင့်အတူအက်တမ် (အသုံးပြုရန်ဖိအားမရှိသောလေအရင်းအမြစ်မလိုအပ်ပါ)...
ကတ်ထူပြားစက်မှုန်ရေမွှား Humidifier မိတ်ဆက် ၁။ အီတလီမှတင်သွင်းသောမြင့်မားသောဖိအားမြင့်ရေစုပ်စက်ကိုမြင့်မားသောဖိအားနှင့်အတူအက်တမ် (အသုံးပြုရန်ဖိအားမရှိသောလေအရင်းအမြစ်မလိုအပ်ပါ) အတွက်အသုံးပြုသည်။ အနုမြူမှုန်အမှုန့်များသည်ကောင်းမွန်ပြီး nozzle...
Corrugator ကတ်ထူဖြန်းစိုထိုင်းဆ မိတ်ဆက် ၁။ အီတလီမှတင်သွင်းသောမြင့်မားသောဖိအားရှိသည့်ရေစုပ်စက်ကိုမြင့်မားသောဖိအားဖြင့်အက်တမ် (အချိူလေထုအရင်းအမြစ်မလိုအပ်ပါ) အတွက်အသုံးပြုသည်။ အနုမြူမှုန်အမှုန့်များသည်ကောင်းမွန်ပြီး nozzle သည်ယိုစိမ့်မှုရှိသည်။...
BHS Corrugator အဘယ်သူမျှမ Crush ဘီး
ထုပ်ပိုး: PE အိတ် + ပုံး
BHS Corrugator အဘယ်သူမျှမ Crush ဘီး ပူးပေါင်းထားသောဖောက်သည်စက်များ BHS BW PAPERSYSTEM စသည်တို့ ဖော်ပြချက် Huatao အုပ်စုသည် PU Sun Crush Wheel ကိုအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။...
BW Papersystem No Crush Wheel ပူးပေါင်းထားသောဖောက်သည်စက်များ BHS BW PAPERSYSTEM စသည်တို့ ဖော်ပြချက် Huatao အုပ်စုသည် PU Sun Crush Wheel အမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစားကိုထောက်ပံ့သည်။ Polyurethane No-Crush ဘီးကို...
ကတ်ထူပြား PU No-Crush ဘီး
ကတ်ထူပြား PU No-Crush ဘီး ပူးပေါင်းထားသောဖောက်သည်စက်များ BHS BW PAPERSYSTEM စသည်တို့ ဖော်ပြချက် Huatao အုပ်စုသည် PU Sun Crush Wheel ကိုအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။...
Cardboad PU No Crush ဘီး
Cardboad PU No Crush ဘီး အင်္ဂါရပ်များ: Huatao အုပ်စုသည် PU Sun Crush Wheel ကိုအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။ Corrugator ကတ်ထူပြားအဘယ်သူမျှမ Crush ဘီး...
Corrugator Cardboard Polyurethane No Crush Wheel အင်္ဂါရပ်များ: Huatao အုပ်စုသည်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသော polyurethane နှိပ်စက်ဘီးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ Polyurethane Crush Wheel...
လျှပ်စစ်စက်ကြိတ်စက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍ Huatao သည်ကတ်ထူစက်ရုံများသို့စီးရီးအပိုပစ္စည်းများရောင်းချရန်ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သင့်လျော်သောကျွန်ုပ်တို့၏မော်ဒယ်လ်ကြိတ်စင်နှစ်ခုကိုတစ်ခုမှာတစ်ခုမှာလျှပ်စစ်စက်စက် (သို့မဟုတ် Electric shaftless mill...
Electric Shaftless စက် Roll Roll မတ်တပ်ရပ်
Electric Shaftless စက် Roll Roll မတ်တပ်ရပ် Electric Shaftless Mill Roll Stand ကိုကတ်ထူစက်ရုံတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည် Max. Working Width 1000mm-1800mm Min. Working...
မြှောင်းပုံပုံးနံရံဟိုက်ဒရောလစ် shaftless ကြိတ်လိပ်ရပ်တည်ချက်
ဟိုက်ဒရောလစ် Shaftless စက်ကြိတ်စက် ဖော်ပြချက်: shaftless ဟိုက်ဒရောလစ်စက်သည်လိမ်းထားသောပျဉ်ပြားများနှင့်သေတ္တာများထုတ်လုပ်ရန်အတွက်အလိုအလျောက်နှင့် Semi-Automatic စက်ရုံများတွင်အရေးအပါဆုံးမြှင့်သေတ္တာပုံး၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ Hydraulic Shaftless...
ဟိုက်ဒရောလစ် Shaftless စက် Rolls ရပ်
ဟိုက်ဒရောလစ် Shaftless စက်ကြိတ်စက် ဖော်ပြချက်: စက်တစ်ခုလုံးသည်အပေါ်နှင့်အောက်သို့ရွေ့လျားသည်။ ဖိအားနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိသည်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ထိန်းချုပ်မှုဖြင့်လက်ဝဲနှင့်ညာဘက်သို့ရွေ့လျားသည်။...
Mill Roll ကဒ်ထူပြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ရပ်
Mill Roll Stand ၏ဖော်ပြချက်: Mill Roll Stand ကိုစက္ကူလိပ်ကိုပံ့ပိုးရန်၊ စက္ကူကိုထုတ်လုပ်ရေးလမ်းကြောင်းသို့ပို့ရန်အသုံးပြုသည်။ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ: စက် Roll ရပ်အနက် F ကို unction: * လက်ကိုင်တစ်ခုစီသည်လမ်းညွှန် ၄...
တရုတ်နိုင်ငံ မြှောင်းပုံကတ်ထူစက်အပိုပစ္စည်းများ ပေးသွင်း
Huatao သည် Carton Making Machinie၊ Carton Box ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ပုံနှိပ်နှင့်အသေဖြတ်ကိရိယာများကိုကျွမ်းကျင်သောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။
သင့်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်။ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် နည်း၍ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကတ်ထူပြားများနှင့်ကတ်ထူများပြုလုပ်ရန်သင်ကူညီသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်ကောင်းမွန်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သန္တာကျောက်တန်းများအတွက်မြှင့်တင်သည့်ခါးပတ်များနှင့်သန္ဓေသားအစိတ်အပိုင်းများကိုအထူးဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းကိုမရောင်းချမီရောင်းချနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာကိုလည်းသင်၏စက်ရုံသို့ပို့ရန်၎င်းစက်များနှင့်အစိတ်အပိုင်းများတပ်ဆင်ရန်နှင့်သင့်ကိုကူညီနိုင်သည်။ သင်၏စက်များနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုအမြန်ဆုံးလည်ပတ်စေပါ။
မြှောင်းပုံခါးပတ် Humidifier လေပေါ်မှာပ Anilox Roll Shaftless Mill Roll ရပ်ပါ ဖြတ်နေမြို့ပတ်ဓား ကြိတ်ဘီး PVC မြှောင်းပုံခါးပတ် မြှောင်းပုံခါးပတ် -9Mm